Namichi Indoneezhiyaa sagaagaluurratti seera baase sagaagaluurratti qabame - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Miseensa MPU kan ta'e Muukhiliis yeroo addabaabaayiitti reebamutti miira inni agarsiisaa jiru
Namichi lammii Indoneezhiyaa umuriin isaa ganna 46 ta'e yakka sagalgaluurratti seera baasuun beekama. Haata'u malee, ofii isaa sagalgaluurratti qabamee uleedhaan si'a 28 yoo rukkutamu, dubartiin inni waliin sagalgale kunis uleedhaan si'a 23 dhaanamteetti.
Namichi kun dhabbata wixinee seeraa kan sagalgaltummaa dhorku baasuu keessatti ga'ee guddaa gumaachuun beekamaa ta'ullee, dubartii biroo gaa'ela qabdu waliin osoo sagalgalaa jiruu qabamee addabaabaayiirratti bakka ummanni arganitti reebameera.
Namichi maqaan isaa Muukhiliis bin Muhaammad jedhamuufi Mana Maree Ulemaa Aseeh (MPU) keessa hojjetu kun yakka raawwate kanaaf si'a 28 rukkutameera.
'Halkan guyyaa cidha keenyaa diigamuu gaa'ila keenyaaf sababa'
Dubartiin inni waliin sagalgale kun ammoo si'a 23 ture kan dhaanamte.
Muukhiliis naannoo Aseeh jedhamu warra ciminaan leellistoota ta'aniifi Indoneezhiyaa keessatti ammoo seera Islaamaa cimaa, Shariyaa, hordofanirraati.
Aseeh keessatti saalqunnamtiin warra saalaan walfakkaatan gidduutti taasifamuufi qumaarri (tirgaan) addabaabaayiitti ummata duratti reebamuun nama adabsiisa.
"Kun seera Waaqaadha. Namni kamiyyu yakkamaa ta'ee yoo argame dhaanamamuu (waggaramuu) qaba. Yoo miseensa Mana Maree Ulemaa Aseeh (MPU) ta'ellee," jechuun kan BBC'tti himan Itti-aanaan Kantiibaa Aseeh Besaar Huseen Wahaab.
Namoonni yakka sagalgaluu raawwatan kunneen Fulbaana keessa ture kan konkolaataa qarqara galaanaa turistoonni daawwatan dhabatee jiru keessatti poolisootaan qabaman.
Adabbiin reebichaa kun ammoo Kamisa darbe ture. Obbo Huseen itti dabaluudhaan Muukhiliis MPU keessaallee ari'amuudhaaf jira jedhan.
Muukhiliis gageessaa amantaa Islaamaadhas. Erga bara 2005 irraa kaasee seerri Shariyaa hojiirra oolee booda namoota addabaabaayiitti reebaman keessaa gaggeessaa amantaa isa jalqabaadha.
Dhaabbanni MPU kun seera Shariyaa baasuufi Aseeh keessatti hojiirra oolchuu irratti mootummaa naannichaaf gorsa kennuun tajaajila.
Naannoo Aseeh jedhamu kun seerawwan Islaamaa cimaa kan ofii isaa akka hojiirra oolchuuf mirgoonni addaa waggoota kudhan dura kennameeraaf.
Seeronni saal-qunnamtii warra saalaan walfakkaatanii gidduutti taasifaman dhorkan bara 2014 tumamee bara itti aanutti ammoo hojiirra ooleera.
Seera Shariyaa jalatti saal-qunnamtiin gaa'elaan alaa, qumaarri (tirgaan) akkasumas alkoolii dhuguu, omishuufi rabsuun hundi isaanii yakkadha.
Bara 2017 keessa, magaalattii keessatti namoonni lama osoo saal-qunnamtii raawwataa jiranii qabamanii tokkoo tokkoon isaanii si'a 83 reebamanii ture.
Uleen ykn wanti ittiin yakkamaa reeban yeroo baayyee funyoo ykn qaaccaarraa hojjetama. Namoonni reebicha akkasii gaggeessan ammoo akka eenyummaan isaanii adda ba'ee hin beekamnetti, ija isaaniirraa kan hafe guutummaa qaama isaaniitti uffata xaxatu.
Addabbiin reebichaa ammoo addabaabaayii bakka banaa ta'eefi namoonni hedduu itti walitti qabamanitti gaggeeffama.
Ijoolleen garuu bakka adabbiin kun itti gaggeefamurraa ni dhorkamu.
Aseeh keessatti seerri Shariyaa warra Musliima ta'eerrattis warra Musliima hin taanerrattis hojiirra ni oola.
Guntunni durbaa akka hin guddanne gochuun maaliif?